Maxaad ka taqaan Taariikhda siyaasadeed ee Axmed Madoobe Iyo Marxaladii Uu Soo Maray (2006 ilaa 2015) – STAR FM SOMALIA
Sheekh Axmed Maxamed Islaam oo loo yaqaanay Axmed Madoobe markii u horeysay ee la maqlo magaciisa waxay aheyd sanadkii 2006-dii xilligii Midowgii Maxkamadaha Islaamiga, waxaa ka mid ahaa Hogaamiyeyaashii islaamiyiinta.
Axmed Madoobe ayaa sanadkii 2006-dii loo magacaabay Guddoomiyaha Midowga Maxkamadaha ee Gobollada Jubooyinka, xilligaasoo duulaan isaga iyo Hogaamiyihii geeriyooday Xasan Turki ay kula wareegeen magaalada Kismaayo oo xarun u aheyd Isbaheysigii dooxada Jubba ee uu hogaaminayay Col. Barre Hiiraale oo ahaa xubin ka tirsan Baarlamaankii KMG ee fadhigiisa ahaa Baydhabo.
Sheekh Axmed Madoobe waxaa la sheegaa inuu kuxigeen ka ahaa Xarakada Al-Shabaab, waxaana uu ku xigay Sheekh ismaaciil Caraale oo ahaa Amiirkii u horeeyay ee Al-Shabaab oo ahaa garab ka tirsan Maxkamadihii islaamiga.
Dad badan ayaa u arkayay hogaamiye mayal adag, xilliyadii uu ahaa Guddoomiyihii Maxkamadaha Islaamiga ee Jubooyinka, markii Kismaayo lala wareegay waxaa mar kale loo arkayay hogaamiye awood ku lahaa Jubooyinka, isaga oo ku garab ahaa Sheekh Xasan Turki.
Kadib duulaankii Ciidamada Itoobiya oo taageero siinayay dowladdii Madaxweyne C/llaahi Yuusuf, Maxkamadihii Islaamiga ayaa laga saaray Gobolladii Koofurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxaana Axmed Madoobe uu mar ku dhaawacmay duqeymo deegaanada howdka ah ee Kudhaa ka geysteen diyaaradaha dagaalka Mareykanka, waxaana isagoo dhaawac ah qabtay Ciidamadii Itoobiya oo mar dambe u qaaday Isbitaal ku yaalla Isbitaal gudaha Itoobiya, halkaasoo markii dambe lagu xiray.
Axmed Madoobe ayaa isagoo xabsiga ku jiray waxaa uu sanadkii 2009-kii ka mid noqday Baarlamaankii 550 xubnood ka koobnaa ee Jabuuti lagu dhisay ee 275 xildhibaan ka yimid Isbaheysigii dib u xoreynta ee Sheekh Shariif hogaaminayay.
Sheekh Axmed Madoobe ayaa laga sii daayay xabsi ku yaalla Itoobiya, xilligaasoo Madaxweynihii Sheekh Shariif uu dowladda Itoobiya u sheegay in mid ka mid ah Baarlamaanka Soomaaliya uu xabsigooda ku xiran yahay, sidaasna lagu sii daayay.
4-tii April sanadkii 2009 ayuu ku dhawaaqay inuu isaga baxay Baarlamaanka, kadib shir jaraa’id uu ku qabtay magaalada Kismaayo, waxaana wixii markaas ka dambeeyay uu noqday Hogaamiyaha Raaskambooni, waxaana ay ku biireen Ururkii Xisbul Islaam ee uu hogaaminayay Sheekh Xasan Dahir Aweys.
Xisbul Islaam iyo Al-Shabaab oo is baheysanayay ayaa bishii May sanadkii 2009 duulaan ku soo qaaday dowladdii curdanka aheyd ee uu hogaaminayay Madaxweyne Sheekh Shariif, waxaana Axmed Madoobe uu ka mid ahaa Saraakiishii ku shirtay Afgooye oo la sheego inay aheyd meelihii lagu dejiyay duulaankaas.
Bishii October sanadkii 2009-dii ayaa waxaa mar qura Al-Shabaab iyo Xisbul Islaam ka dhex bilowday muran dhinaca maamulkii meertada ahaa ee Kismaayo, waxaana garabka uu hogaaminayay Axmed Madoobe ay ku doodayeen inuu yahay xilligii iyana ay la wareegi lahaayeen maamulka Kismaayo oo xilligaa loo arkayay mid dhaqaale badan ka imaanayay.
Muranka ka dhashay maamulkii Kismaayo ayaa aakhirkii isu bedelay gacan ka hadal, waxaana dagaal maalmo qaatay uu ka dhex qarxay ciidankii Axmed Madoobe uu hogaaminayay iyo Al-Shabaab, waxaana ugu dambeyn laga saaray magaalada Axmed Madoobe, ilaa ugu dambeyn xuduuda Kenya la dhaafsiiyo.
Axmed Madoobe ayaa gudaha Kenya ka soo bilaabay jabhadeyn, iyadoo ay taageerayeen Ciidamada Kenya waxay ka soo tallaabeen xuduuda, dagaalo ka dhacay Dhoobley horaantii sanadkii 2011 ayay ugu suura gashay inay la wareegaan oo Al-Shabaab ka saaraan.
Hogaamiye Axmed Madoobe oo dib u aas aasay Raaskambooni ayaa kadib isaga oo ay wehliyaan Ciidamada Kenya oo dhamaadkii sanadkii 2011 gudaha u soo galay Soomaaliya waxay bishii October 2012 la wareegeen magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbada Hoose oo aheyd magaalo xeebeed istiraatiiji ah.
Halganka Axmed Madoobe kuma koobneyn kaliya jabhadeyn ee waxaa ku lamaanaa damac siyaasadeed, waxaa 15 bishii May 2013 ergooyin shir uga socday Kismaayo ay u doorteen inuu yahay Madaxweynaha Jubbaland, waxaana doorashadaas qaadacday dowladda Federaalka Soomaaliya ku tilmaam mid aan xaq iyo xalaal ku dhicin, loona arkayay in Axmed Madoobe is doortay.
Doorashada Axmed Madoobe kadib Kismaayo waxaa ka soo baxay illaa afar Madaxweynayaal is doortay oo uu ka mid ahaa Col. Barre Aadan Shire Hiiraale oo la sheego in Kismaayo doon lagu geeyay, waxaana kadib dagaal dhex maray Axmed Madoobe oo taageero ka helayay ciidankii Kenya iyo Madaxweynayaashii magaalada ku sugnaa, iyadoo markii dambe laga awood roonaaday Col, Barre Hiiraale iyo xubnihii kale ee Madaxweynayaashii is magacaabay.
Khilaafka Axmed Madoobe maamulkiisa ee Kismaayo iyo dowladda Federaalka ee saldhigeedu aheyd magaalada Muqdisho ayaa sii xoogeystay, waxaana dowladda Itoobiya oo danooyin badan wadatay ayaa wada hadalo labada dhinac ugu qabatay magaalada Addis Ababa, waxaana 28 Agosto 2013 ka soo baxay heshiis dhigayay in Axmed Madoobe muddo labo sano uu noqdo Hogaamiyaha Maamulka KMG ah ee Jubba, iyadoo heshiiskaas kadib uu suura geliyay in dowladda Federaalka iyo Axmed Madoobe isu soo dhowaadaan, illaa Axmed Madoobe uu booqashadii u horeysay ku yimid magaalada Muqdisho, kadib jabhadeyntiisa.
Axmed Madoobe ayaa taageero ka helayay maamulka Puntland ee uu hogaaminayay Madaxweyne Faroole, waxaana uu safaro ku tagay Garowe, sidoo kale Madaxweyne C/wali Gaas oo loo doortay Madaxweynaha Puntland bishii Janaayo sanadkii 2014 ayuu taageero la mid ah tii Farooel oo kale ka helay.
Bishii May ee sanadkan 2015 ayaa waxaa muran ka dhashay soo xulistii Baarlamaanka Jubbaland, kaasoo markii dambe cabasho badan ka timid, Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ayaa ku tilmaamay dhismaha Baarlamaanka Jubbaland mid aan si cadaalad loo soo xulin, sidaas darteed uu sharci darro yahay.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ayaa mooshin ka geeyay dhismaha Baarlamaanka Jubbaland, waxaana 6-dii June ee sanadkan, kadib maalmo uu dib u dhac ku imaanayay cod u qaadistiisa isku raacay in aanu ansax aheyn Baarlamaanka Jubbaland, isla markaana uu sharci darro yahay.
War saxaafadeed ka soo baxay Maamulka Jubbland ayaa lagu sheegay in xiriirka ay u jareen dowladda Federaalka, taasoo u muuqatay mid la mid ah dhaqamadii laga bartay Puntland, waxaana mar walba Maamulka Jubbaland u gurbaan tumayay dhigooda Puntland oo garab-siinayay.
Madoobe oo saaxib dhow la ah Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas ayaa waxay isku aragti ka noqdeen shirkii Hiigsiga 2016 ee lagu qabtay magaalada Muqdisho dhamaakii bishii July ee sanadkan 2015, iyadoo qaadacay ka qeyb galka shirkaas.
Ka sokow taariikhda wajiyada badan ee uu Axmed Madoobe uga soo muuqday saaxada siyaasada Soomaaliya, waxay noqotay mid dhaxalsiisay inuu maanta noqday mid ka mid ah Madaxweynayaasha Maamul goboleedyada ee talada 2016 ka go’i doonto.
Marka laga soo taago taariikhdiisa shalay iyo mida maanta waxaa uu xiriir dhow la leeyahay dowladdaha Itoobiya iyo Kenya, oo ah dowlado saameyn ku leh siyaasada Soomaaliya, kumanaan ciidamana ka joogaan.
Axmed Madoobe ayaa labo sano kadib heshiiskii Addis Ababa waxaa maanta oo taariikhdu tahay 15 Agosto 2015 loo doortay Madaxweynaha Maamulka Jubbaland, waxaana Dadka u dhuundaloola arrimaha Jubbooyinka ay doorashadan ku tilmaamay in ay tahay mid si dhib yar loogu doortay Axmed Madoobe ayna ka dhigan tahay Nin Dooran Doorta.
Ugu dambeyn dadka odorasa siyaasada ayaa sheegaya in Axmed Madoobe uu haatan yahay hogaamiye labo dhinac uga soo muuqday siyaasada jaantaa-roganka ee Soomaaliya